Raha tsy mahazo ireo taratasy fahazoan-dalana ilaina sy takiana aminy ho an’ireo trano vao amboarina ireo noho izany i Kanye West dia tsy maintsy ho arodany izany.
2. Efa niteraka roa ilay mpilalao sarimihetsika Halle Berry amin’izao fotoana izao. Teo amin’ny faha-40 taonany izy no niteraka ilay zanany vavy voalohany, Nala. Nilaza ity mpilalao sarimihetsika ity fa nanenina ihany tsy niteraka alohaloha. Nanome lanja ny asany amin’ny maha-mpilalao sarimihetsika azy aloha mantsy izy vao nanapa-kevitra ny hiteraka. Raha niteraka aloha nefa izy, araka ny filazany dia afaka nankafy tsara ny fahasambarana amin’ny fitaizana. Ary tokony naka ireny “mere porteuse” ireny mihitsy aza izy tamin’izany.